Caano (1,5-dimethylhexyl) budada ammonium (5984-59-8) - Phicoker
Caano (1,5-dimethylhexyl) budada ammonium (5984-59-8)
Hilibka (1,5-dimethylhexyl) chloride ammonium chloride waa daawada suuxinta iyo .........
Capacity: 1400kg / bishii
SKU: 5984-59-8 Category: Lumid Miisaan
Qalab (1,5-dimethylhexyl) budada ammonium (5984-59-8) video
Qamriga (1,5-dimethylhexyl) budada ammonium (5984-59-8) Chloride Specifications
Product Name Root (1,5-dimethylhexyl) chloride budada budada ammonium
Magaca Kiimikada Cheese (1,5-dimethylhexyl) chloride ammonium chloride; 2-Heptanamin, 6-methyl-, hydrochloride (1: 1)
brand NAme Root (1,5-dimethylhexyl) chloride budada budada ammonium
Fasalka Daroogada Kiimikada Kala Duwan
Molecular Wsideed 165.7041
dhibic kulayl 229.3 ° C at 760 mmHg
Biological Life-Life joogta biyaha (nus maalmeed 2)
SOlubility iSoluble ee dareeraha ammonia, hydrazine, si yar oo lagu dhalaaliyo acetone Laydhka ku jirta diet ether, etyl acetate
Application loo isticmaalo sida nidaam acidic acid in lagu daaweeyo alkaloosho metabolic daran, ee tijaabada load-ka sameyska afka si loo baaro tubal acidus xuubka ah, si loo ilaaliyo kaadida at a pH ah acid daaweynta qaar ka mid ah cudurada kaadimareen.
qaydhiin (1,5-dimethylhexyl) budada ammonium chloride (5984-59-8) Sharaxaad
Cheese (1,5-dimethylhexyl) chloride waa budad ammonium waa unug aan ku jirin oo leh qaabka NH4CI iyo milix cad crystalline oo aad u sarreeya oo biyo ah. Solutions of chloride ammonium chloride waa mid liid acidic ah. Sal ammoniib waa magac dabiiciga ah, macdan macaan oo ah chloride ammonium. Macdanta ayaa badanaa laga sameeyaa dhuxul dhuxusha laga bilaabo gaasaska gaasaska dhuxusha. Waxaa sidoo kale laga helaa hareeraha qaar ka mid ah dusha sare ee volcanic. Waxaa inta badan loo isticmaalaa bacrimin iyo wakiil macmacaan ah noocyada qaar ka mid ah aalkolada. Waa sheyga ka soo horjeeda diidmada hydrochloric acid iyo ammonia.
(1,5-dimethylhexyl) budada ammonium chloride (5984-59-8) Habka Wax-qabadka
Suuxdinta goobta waxaa lagu soo saaraa isticmaalka kulaylaha ee xalalka hydrochloride ama saldhig bilaash ah ee 2-Amino-6-methylheptane si aad u aragto bakaylaha. Daawada eeyaha ee eyda lagu suuxiyo cusbada "pentobarbital sodium", 2-Amino-6-methylheptane hydrochloride waxay muujisaa 1 / 500-1 / 1000 dhaqdhaqaaqa saxaafadda ee epinephrine. 2-Amino-6-methylheptane hydrochloride waxaa lagu ogaadey inay kordhinayso qiyaasta wadnaha iyo xajmiga foosha. Xiddi ku jirta eeyaha, suuxdinta siliumarka pentobarbital, qiyaasaha 0.5 ilaa 1.0 mg kiilo culus oo jirka ah 2-Amino-6-methylheptane hydrochloride wax saameyn ah looma ogaan karo mindhicirka yar, xakameyn kaadi-haystaha, dheecaanka kaadida ama nuugista. Xakamaynta astaamaha, 2-Amino-6-methylheptane hydrochloride waxaa lagu ogaadaa inay ku dhowdahay in laga fogaado nidaamka dhexe ee dareen-celinta ee wax-qabadka kicinta aan caadiga aheyn. Ma jirto caddayn taariikheed ee caddaynta cuncunka tracheo-bronchial ochosa ayaa lagu xusay bakaylaha ama jiirka oo xajinaya saldhigga 2-Amino-6-methylheptane maalin walba 10 iyo 30.
Isticmaal of (1,5-dimethylhexyl) budada ammonium chloride (5984-59-8)
▪ Waxqabadka ciyaaraha fudud.
▪ Miisaanka culus.
▪ Iyadoo ah dhexdhexaadin daawo octamylamine ah
▪ Qalabka acidic-ku-oogayaasha
Talooyin (1,5-dimethylhexyl) budada ammonium chloride (5984-59-8) Qiyaasta
Talo bixinta rasmiga ee rasmiga ah ee loogu talagalay (1,5-dimethylhexyl) ammonium chloride, si kastaba ha ahaatee ku salaysan daraasaadka xayawaanka iyo kuwa la midka ah ee DMAA, qadar cabir ah oo lagu ilaaliyo daaweyntu waxay noqonaysaa 1mg / kg oo miisaankeedu yahay ilaa 160mg. LD50 (qiyaasta loo baahan yahay in la dilo badh ka mid ah xayawaanka tijaabada ah) (1,5-dimethylhexyl) chloride ammonium chloride waa 59mg / kg. Mar labaad, waxaa ugu wanaagsan in la xakameyno qiyaasaha daaweyneed ee hadda ah, waana muhiim, in badan oo cilmi-baaris ah waa in la sameeyaa ka hor inta aan la sii deynin dheellitirka. Waqtiga caqliga leh, waxaa ugu wanaagsan in la qaato daqiiqado 30-60 ka hor inta aan la sameynin tababarka si loo caawiyo kor u qaadida wajiyada tababarka, halka sidoo kale laga qaadi karo maalinta oo dhan oo ah xakameyn cunto yari.
Dheefaha (1,5-dimethylhexyl) budada ammonium chloride (5984-59-8)
◆ Ku shaqeynta sida bamiir-saareyaasha (ballaarinta baalalka hawo badan oo hawada ah)
♦ Waxqabadka mudnaanta leh (xaddididda xididdada dhiigga ee bararka oo yaraaday iyo sidaas darteed awood u leh inuu neefsado).
♦ Feejignaanta horumarka iyo xakameyn xoog leh oo xoog leh.
♦ (1,5-dimethylhexyl) ammonium chloride waxaa loo isticmaali karaa in la qaado si loo kordhiyo awooda kor loogu qaado heerarka tamarta iyo xoojinta fejignaanta iyo dareenka.
♦ (1,5-dimethylhexyl) budada ammonium chloride waxay haysaa qaab isku mid ah oo loo yaqaan "compounds" kuwaas oo loo arko walxaha sii daaya monoamine. Taasi waa, waxay kordhin kartaa heerarka monoamines sida dopamine iyo noradrenaline.
♦ Waxay si cad u taageeri kartaa shaqo-yaraansho badan oo yareynaya RPE-ga (heerka heerka farsamada).
Kiniiniga Tianeptine sodium cusbada waa tricyclic compound, waa fududeeye xulasho ah ee 5-HT (serotonin; sc-201146) qaadashada in vitro ....
Budada 1.3-dimetyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) (13803-74-2)
Kalluun 1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) waa .......
Capacity: 12400kg / bishii